VaMugabe Vanoperekedza Mudzimai Wavo Amai Grace kuSingapore Kunorapwa
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanonzi vakabuda munyika zvechimbi chimbi manheru eChishanu vakananga kuSingapore murwendo rwekuperekedza mudzimai wavo, Amai Grace Mugabe, avo vanonzi havasi kunzwa zvakanaka.
Bepanhau reThe Standard rakati Amai Mugabe vakatsvedza ndokudonha muimba yekugezera kumba kwavo kuBorrowdale, izvo zvinonzi zvakaita kuti vakuvare hudyu.
Munyori webazi rezvekuburitswa kwemashoko, uye vachitaura vakamirira VaMugabe, VaGeorge Charamba, vakaudza bepanhau reThe Standard kuti VaMugabe nemudzimai wavo vakanga vabuda munyika vakananga Singapore, asi vakati havana ruzivo rwakakwana nezverwendo urwu.
Ivo VaMugabe mbune kubva muna Ndira vainge vachinziwo vari kuenda Singapore kunoonekwawo hutano hwavo, uho hunonzi hahuchina kumira zvakanaka. Asi VaCharamba vakati VaMugabe vaienda kunoonekwa maziso avo.
Kana VaMugabe vasiri munyika, misangano yedare remakurukota inonzi inombosendekwa parutivi, izvo zvisiri kufadza vanhu vakawanda, kusanganisirawo mamwe makurukota ehurumende.
Vapedzisai Ruhanya vanove nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari Programs Manager weCrisis in Zimbabwe Coalition, vati havaoni paine chakaipa kana VaMugabe vakaperekedza mudzimai wavo kunorapwa, danho raikwanisa kuitwa nani nani zvake anenge aine mudikani wake ari kurwara.